3 Dariiqyada Isku-dhajinta Shabakadaha kala duwan ee ka soo jeeda ciriiriga
Maxay muhiim u tahay iyo baahida ka saarista ama tirtiridda macluumaadka bogagga internetka sii kordhaya waqtiga la joogo. Badanaa, waxaa jira baahi loo qabo in laga soo saaro xogta laga helo bogagga asaasiga ah iyo kuwa sare. Mararka qaar waxaan gacanta ku heynaa xogta, mararka qaarkoodna waa inaan isticmaalnaa qalab sida fiirinta xogta buuggu ma siinayo natiijooyinka la rabo iyo kuwa saxda ah.
Haddii aad ka walaacsan tahay sumcadda shirkaddaada ama calaamadda, waxay rabaan inay kormeeraan shabakadaha internetka ee ku hareeraysan ganacsigaaga, waxay u baahan yihiin inay sameeyaan cilmi baaris ama ay ku hayaan farta garaacid warshad ama shey gaar ah, waxaad had iyo jeer u baahan tahay inaad xoqdo xogta oo aad ka soo qaadato foomka unugyada aan habboonayn ee loo qaabeeyey.
Halkan waa inaanu tagnaa si aan ugala hadalno 3 siyaabood oo kala duwan oo laga soo saari karo xogta webka.
1. Dhis sheygaaga shakhsi ahaaneed.
2. Isticmaal qalabkii burburay.
3. Isticmaal xogta horay loo soo koobay.
1. Qalbiggaaga dhiso:
Habka koowaad ee ugu caansan ee wax looga qaban karo xogta waa in la dhiso saldhiggaaga. Sidaa darteed, waa inaad barataa luqadaha barnaamijyada qaarkood waana inaad si adag u xoojisaa farsamooyinka shaqada. Waxa kale oo aad u baahan doontaa qaar ka mid ah server-yada loo yaqaan "scalable and scileable server" si loo kaydiyo oo loo helo xogta ama bogga internetka. Mid ka mid ah faa'iidooyinka asaasiga ah ee habkaan ayaa ah in gawaarida loo habeyn doono sida shuruudahaaga, oo ku siinaya dhamaystirka kantaroolidda hannaanka xogta. Waxay ka dhigan tahay inaad heli doonto waxa aad dhab ahaan doonayso oo aad ka tirtiri karto macluumaadka bogagga intarnetka ee badan sida aad rabto adoon walwal gelin miisaaniyadda.
2. Isticmaal Isticmaalayaasha Meelaha ama Qashin-qaadista:
Haddii aad tahay baqshad xirfad leh, barnaamij-dejiye ama webmaster, waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti aad ku dhisto barnaamijkaaga burburinta. Xaaladahan oo kale, waa inaad isticmaashaa xog-bixiyeyaasha hore ee jira ama qalabkii burburay. Soo dejinta. io, Diffbot, Mozenda, iyo Kapow ayaa ah qaar ka mid ah meelaha ugu fiican xogta webka qalabka internetka. Waxay ku yimaadaan labada lacag oo bilaash ah oo lacag leh, taasoo kuu sahlaysa inaad xogta ka hesho goobaha aad ugu jeceshahay. Faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka qalabka waa in aysan kaliya soo saarin macluumaadka adiga laakiin sidoo kale waxay abaabuli doontaa oo ku dhisan doontaa iyada oo kuxiran baahidaada iyo rajooyinkaaga. Ma qaadan doonto waqti badan si aad u sameyso barnaamijyadan, waxaadna had iyo jeer heleysaa natiijooyinka saxda ah ee la isku halleyn karo. Intaa waxaa dheer, xariiqa shabakadda qalabka ayaa fiican marka aan la macaamilayno khayraadka la soo dhafay oo waxaan dooneynaa inaanu kormeerno tayada xogta inta lagu jiro geedi socodka burburinta. Waxay ku haboon tahay ardayda iyo cilmi baarayaasha, iyo qalabkani waxay ka caawin doonaan inay si haboon u sameeyaan cilmi baaris online ah.
3. Xogta La-Qabtay ee ka timid Webka. Io Platform:
Webhose. Mashruuca io wuxuu ina siinayaa helitaanka xogta si fiican loo soo saaro iyo faa'iido leh. Iyadoo la adeegsanayo xogta-sida-adeegga (DaaS), uma baahnid inaad sameysid ama aad sii wadatid barnaamijyada kaydka shabakadda waxaadna awoodi doontaa inaad hesho macluumaad horudhac ah oo qaabaysan. Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan sameyno waa in aan ku xaddidnaa macluumaadka adoo isticmaalaya API-ga si aan u helno macluumaadka ugu saxsan ee saxda ah. Laga soo bilaabo sanadkii hore, waxaan sidoo kale ku heli karnaa macluumaadka taariikhda taariikhda taariikheed ee habkan. Waxay micnaheedu tahay haddii wax hore looga lumay, waxaan awoodi karnaa inaanu galno buuga Achieve ee Webhose. io Source .